စိတ်ကူးနဲ့ တောင်မှမပြစ်မှားမိစေဖို့ ငှက်ပျောသီး၊ သခွားသီးများ မထိရမကိုင်ရ...
မဖွယ်မရာအတွေးများစိတ်ကူးမိခြင်းမှ ပယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက် အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် သခွားသီးနှင့် 
ငှက်ပျောသီးများအား အငိုက်မိကာ၊စိုက်ကြည့် ခြင်းမပြုသင့် ကြောင်းဥရောပတွင်အခြေစိုက်နေထိုင်သည့် 
မွတ်ဆလင်ဗလီဆရာကြီးတစ်ဦးက အမိန့် ရှိလိုက်ပါတယ်...
အကယ်၍အမျိူးသမီးများထိုအသီးအနှံများအား စားသုံးလိုပါက ဖခင် သို့ မဟုတ်၊ခင်ပွန်းအဖြစ်တော်စပ်
သူအမျိူးသားတစ်ဦးဦးမှထိုအသီးများအား အစိတ်သေးသေးလေးများဖြစ်အောင်ခွဲစိတ်ကာ ပြင်ဆင်ပေး
သင့် ပါတယ်လို့ အမည်မဖော်ပြထားသည့် အဆိုပါ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်က အယ်လ်ဆနိုဆာ သတင်း
စာတွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့ သည့် ဆောင်းပါးတွင် ရေးသားထားခဲ့ ပါတယ်...
စားစရာကို စားစရာလိုသဘောထားယင် ဒီလိုစိတ်ကူးတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ ...
အဆိုပါအသီးအနှံများဟာ အမျိူးသားများ၏လိင်အင်္ဂါများနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆင်တူတာမို့ အမျိူးသမီးများ
အား လိင်စိတ်နိုးကြွစေ၊ ထိုအကြောင်းစိတ်ကူးစဉ်းစားမိစေနိုင်တယ်လို့ ၎င်းကဆိုပါတယ်...
မုန်လာဥ၊ ဘူးဖရုံနွယ်ဝင် သပွတ်သီးကဲ့ သို့ အသီးမျိူးများလည်း အမျိူးသမီးများ မကြည့် ရ၊ မထိတွေ့ မကိုင်
တွယ်ရမည့် စာရင်းတွင်ထည့် သွင်းသည့် တယ်လို့ လည်း သူကထပ်ပြီးပြောကြားခဲ့ ပါသေးတယ်...
အကယ်၍ အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ဈေးဆိုင်များသို့ ဟင်းချက်စရာများသွားဝယ်ရာတွင် ထိုကဲ့ သို့ အသီးအ
နှံများအား ကိုင်တွယ်ခြင်းဟာ ၎င်းတို့ အား ဆိုးကျိူးများသက်ရောက်နိုင်ခြင်းအပေါ် မည်ကဲ့ သို့ တားဆီး
ထိန်းချူပ်နိုင်ရန် ၎င်းအားမေးမြန်းခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွား...ခူးအကုန်မစားနဲ့ ...
ယောင်လို့ တောင်မှ စေ့ စေ့ မကြည့် မိစေနဲ့ နော်...
ထိုကိစ္စ၊ ပြဿနာအကြောင်းအရာမှာ ၎င်းတို့ ( ဗလီဆရာ၊ ဘာသာရေးဆရာများ) နှင့် ထာဝရဘုရားသခင်
(အလ္လာရှုင်မြတ်) တို့ နှင့် သာသက်ဆိုင်သည်ကြောင်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ ပါတယ်...
မိသားစုဝင်အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ထိုသီးနှံများအား နှစ်သက်ခဲ့ ပါက မည်ကဲ့ သို့ ပြုလုပ်သင့် ကြောင်းမေး
ခွန်းအပေါ်တွင်ဖြေကြားရာတွင် ထိုအသီးအနှံများအား မမြင်ကွယ်ရာသို့ ယူဆောင်ကာ လှီးဖြတ်ကာ ပြုလုပ်
ပေးသင့် ပါတယ်လို့ ထိုဘာသာရေးဆရာကြီးက အကြံပေးပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ထိုယူဆချက်အပေါ် အင်တာနက်အွန်လိုင်းအသုံးပြုသည့် မွတ်ဆလင်များက အပြင်းအထန်ပြစ်တင်ရှုံ့ ချမှု
များ ဖြစ်ပွားစေခဲ့ ပြီး ထိုဗလီဆရာကြီးအား လှောင်ပြောင်သရော်သည့် မှတ်ချက်ပေါင်း ထောင်နှင့် ချီကာ
လာရောက်ဖတ်ရှုသူတစ်ဦးက ထိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာအား အမည်ဆိုးဖြင့် 
ကျော်ကြားစေတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပြီး အခြားသူတစ်ဦးကလည်း ထိုဆရာကြီးဟာ ကျပ်မပြည့် သူတစ်ဦးလို့ ဆို
လိုက်ကာ ထိုရာထူးမှ ချက်ချင်းထွက်ပေးသင့် ပါတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်...
သြော်...သြော်...သြော်...လို့ သာဆိုလိုက်ချင်ပါတော့ တယ်ဗျာ...
မူရင်းလင့် ခ် ....
He said that these fruits and vegetables “resemble theးmale penis” and hence could arouse women or “make them think of sex.” He also added carrots and zucchini to the list of forbidden foods for women. The sheikh was asked how to “control” women when they are out shopping for groceries and if holding these items at the market would be bad for them.
Posted by peter kyaw | at 9:39 AM |
အဲဒါဟုတ်တယ် ကိုပီတာရဲ့...အဲဒီ ဆရာကြီးသမီးက ဟိုနေ့က ပဲ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်က ရုံးပတီးသီး ငရုတ်သီး သခွးသီး ခရမ်းသီး ဗုံလုံသီး ငှက်ပြောသီး(ဖီးလ်ကြမ်း) နဲ့ မုန်လာဥဖြူ ၊ အနီ နဲ့ ကြောင်လျှာသီး သုံးပြားတောင် ၀ယ်သွားသေးတယ်.... ဘာပြောကောင်းမလဲ နောက်နေ့မှာ ဆရာကြီးက သူ့သမီးကို မီးဖိုချောင်ထဲ ပစ္စည်းနဲ့တစ်ကွ လက်ပူးလက်ကြပ်မိလို့လေ..အဲဒါကောင်မလေးခမျာ ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ငိုနေသေးတယ်... :P